Deep (2021) – Gold Channel Movies
တလောလေးကမှထွက်ရှိထားတဲ့ Sci-Fi, Thrillerထိုင်းဇာတ်ကားကောင်းလေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်
ဂျိန်း၊ စင်၊ ဝင်း၊ ပိခ်ျဆိုတဲ့ဆေးကျောင်းသူကျောင်းသား၄ယောက်က သူတို့ရဲ့နေထိုင်မှုဘဝပုံစံ ၊ စိတ်ဖိစီး‌ဒဏ်တွေကြောင့် အိပ်မပျော်တဲ့ဝေဒနာကိုခံစားနေရကြသူတွေပါ ၂၄နာရီလုံးလုံး တစ်ရေးမှမအိပ်ပဲလည်း ရက်ပေါင်းများစွာနေနိုင်ကြသူတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်
အဲလိုကျောင်းသား၄ယောက်ဆီကို မအိပ်ဘဲနေရုံနဲ့ ပိုက်ဆံအများကြီးရနိုင်မဲ့အခွင့်အရေးတစ်ခုရောက်လာပါတယ်
သူတို့ရဲ့ဆရာမဖြစ်သူ နိချာရဲ့မိတ်ဆက်ပေးမှုနဲ့ ဆေးဝါးကုမ္ပဏီတစ်ခုရဲ့ Deepဆိုတဲ့စမ်းသပ်ချက်မှာပါဝင်ဖို့ပါ အဲဒီစမ်းသပ်ချက်မှာအဆင့်၃ဆင့်ရှိပြီး တစ်ဆင့်ပြီးတိုင်းပိုက်ဆံတစ်ခါရတာမျိုးလည်းဖြစ်ပါတယ်
နဂိုကတည်းကမှ မအိပ်ဘဲနေနိုင်ကြတဲ့ကလေးတွေဖြစ်တာကြောင့် ပိုက်ဆံအများကြီးကိုအလွယ်လေးရှာနိုင်မဲ့အခွင့်အရေးကိုလက်လွှတ်မခံခဲ့ကြပါဘူး တစ်ဆင့်ပြီးသွားတိုင်း ထင်မှတ်မထားလောက်အောင်များတဲ့ပိုက်ဆံတွေရတာကြောင့် တစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်အစမ်းသပ်ခံဖို့ပဲအားသန်နေခဲ့ကြပါတယ်
အဲဒီစမ်းသပ်ချက်နောက်ကွယ်မှာဘာတွေရှိနေမလဲ? ပိုက်ဆံမျက်နှာပဲကြည့်တဲ့ကလေးတွေအတွက် အစမ်းသပ်ခံရတဲ့ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးကဘာတွေဖြစ်မလဲ? နောက်ဆုံးအဆင့်အထိအစမ်းသပ်ခံနိုင်ကြမလားဆိုတာကိုတော့ Deepဆိုတဲ့ဇာတ်ကားလေးထဲမှာ အဖြေရှာကြည့်နိုင်ပါတယ်
Download Mediafire SD Myanmar 371mb
Download Mega SD Myanmar 371mb